Waa maxay khatarta xasaasiyadeed ee khatarta ah ee maskaxda?
Cudurka maskaxda ayaa ah, sida caadiga ah, qaab-dhismeedka quwad-ool ah oo ka buuxa dheecaanka cerebrospinal (dheecaanka cerebrospinal). Noocyada noocan oo kale ah ayaa loo qaybiyaa iyada oo ku xidhan xaafadooda. Marka la eego kaneecada 'cerachrospinal arachnoidal cerebrospinal', tani waxa ay tilmaamaysaa samaynta, taas oo si isku mid ah u saameeya kabaha, iyo sidoo kale arinta cawl, i.e. unugyada dareemayaasha. Sidoo kale, marka la cadeeyo xanuunka, waxaa laga yaabaa in loo yaqaan 'cyst' oo sax ah (tusaale ahaan, qalabka dib u-ceshadka ah ee foosha dambe ee foosha, foostada hoose, cyst).
Kala soocista cudurada kala duwan ee horay u soo baxday waxay keenaan dhacdooyin nabaro ah. Tani waxay sababi kartaa cudurrada faafa ee infekshinka leh ee maskaxda, shoogga, xanuunka wareegga dhiigga iyo waxyaabo kale. Iyada oo xajmiga yar ee waxbarashada, ma soo saari karo muuqaal, waxaana lagu ogaan karaa shil ahaan inta lagu jiro baaritaanada ogaanshaha. Xaaladaha noocan oo kale ah, waxaa badanaa lagu taliyaa in si fudud loo kormeero horumarka cysta, daaweynta looma qaban. Maxay noqon kartaa khatarta isdaba marinta ee maskaxda ee khatarta ah, waxaan ka sii fekereynaa.
Cabbirrada nooca loo yaqaan 'corroherebellar arachnoid' waa khatar?
Sida noocyada kaluunka ee maskaxda, noocyada noocaas ah waxay khatar ku yihiin marka ay korodho cabbirka, gaar ahaan deg dega. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan isbeddellada guud ee ku saabsan suurtogalnimada koritaanka faafinta maskaxda iyo xawaaraha geeddi-socodkan, sidaa daraadeed waa suurtagal in la saadaaliyo mustaqbalka "dabeecada" waxbarashada. Waxa kale oo jira halis ah dillaaca iyo uur-ku-taagga cyst.
Haddii uu jiro faafin ka mid ah fayraska infakshanka 'retacherelel', buugani wuxuu keenaa in la iska ilaaliyo meelaha ku dhow maskaxda, bedelaya qaab-dhismeedkooda iyo carqaladeyntooda shaqeynaya. Natiijadu, waxaa jira calaamado si weyn u saameeya nolosha qofka. Calaamadaha suurtagalka ah waxaa ka mid noqon kara:
kabuubyada marinnada ;
Haddii xajmiga waxbarashada lagu xisaabiyo millimitir, hadana badanaa ma dhicin hanjabaad. Hase yeeshe, kororka cabbirka cysto ka badan 1 cm, waxaa lagula talin karaa faragelin degdeg ah.
Gout - daaweynta
Homeikopatiya Nitrikum Acidum
Shoog argagax leh
Caabuqa HIV - Calaamadaha
Saliida Salicylic - siyaabaha ugu fiican ee loo isticmaalo, oo aad taqaanid
Sage - Meelaha la jaro
Duplex scanning of weelasha madaxa iyo qoorta
Cudurka 'Posthemorrhagic Anemia'
Ma ka dheer tahay in lagu daweeyo gubashada leh finan yaryar?
Neuropathy ee dareemaha ulnar
Dumarka Nafaqada Dumarka
Córdoba - Soojiidashada
Dean McDermott ayaa Tori Spelling u bandhigay dalab fasax qoys ah oo ku yaal Paris
Dib u dhigista saxda ah
Miis wareega wareega ee jikada
Maxaa ka fiican - dusha sare ama MDF?
Salad leh finaha iyo naaska digaaga
Maalinta xayiraadda ee wareegga - doorashooyinka ugu wax ku oolka badan
Ku iibinta Antalya
32 fikrado cajiib ah guriga
Waa maxay hindisada - sida looga qaybgalo hindisada loogu talagalay qof cusub oo ku guuleysta?
Iyada oo kabo lagu xiro joornaal adag?
Maxay tahay xakamaynta iyo sida loo saxo si sax ah?
Duufaan aan caadi ahayn 2013
Qosolka "Khariidadda Maalinta"
Broccoli oo koray banaanka
15 xaqiiqooyinka aad u baahan tahay inaad ka ogaato Megan Markle - waa Boqorka cusub ee jecel Harry
Salad leh pear
Isku-qabso jiis iyo cagaarka
Jeceylka dumarka ee 2015